လတ်ဆတ်သောဘီစကွတ်ကွတ်ကီးအချည်များ - တရုတ်နိုင်ငံသို့ပေးသွင်းသူ ၂၀၂၀
နေအိမ် / သတင်း / လက်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်များ Cookies Tins: အပူအအေးပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်း
Tins ၌ဘီစကွတ် / ကွတ်ကီးများကိုသိမ်းဆည်းရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလမ်းညွှန်
အကယ်၍ ၎င်းနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ပါက soft cookies များသည်သူတို့၏အစိုဓာတ်ကိုပျံ့နှံ့စေပြီး၎င်းကိုသံဖြူကွန်တိန်နာအတွင်းသို့ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် crisp cookies များကိုသာမက soft cookies များကိုပါအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
သီးခြားသံဖြူသိုလှောင်မှုကို သုံး၍ ကွတ်ကီးတစ်မျိုးစီကိုသိုလှောင်ရန်၎င်းကိုမဖျက်ဆီးရန်ရှောင်ပါ။
Sorting and Storing အရသာရှိသည်
သင်သည် cookies များကိုသိမ်းဆည်းသည့်အခါ၎င်းတို့အားအရသာရှိစေရန်လည်းစဉ်းစားပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအရသာကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မတူညီသောအရသာများကိုတူညီသောသံဖြူသိုလှောင်မှုတွင်ထားပါက၎င်းတို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကွတ်ကီးစ်များတွင်အစိုဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကမလိုအပ်သောစိုထိုင်းဆကိုပျံ့နှံ့ခြင်းအားဖြင့်အရသာနှင့် texture ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အချို့သော cookies များတွင်အရသာပြင်းထန်ပါက၎င်းတို့သည်အချို့သည်မတူကွဲပြားသောမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေလျှင်တောင်သင် cookie အားလုံးမှတူညီသောအရသာကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
မုန့်ဖုတ်အင်္ကျီလက်များကိုလှည့်ကွက်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ကမကြာခဏထုတ်ဖေါ်ကြဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သင်သည် cookies များကိုသံဖြူသိုလှောင်ခြင်းတွင်သိမ်းဆည်းသောအခါအသားဖြူသားညှပ်ပေါင်မုန့်တစ်လုံးထည့်ပါ။
ယခုဤနောက်ကွယ်ရှိအကြောင်းရင်းမှာအတွင်း၌လတ်ဆတ်မှုကိုပိတ်ဆို့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးပေါသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် cookies ရှိလျှင်ကျန်ရှိသောအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရာတွင်ကူညီသည်။ ပေါင်မုန့်သည်စိုထိုင်းဆကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။
ဒါကိုသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းသင်လုပ်နိုင်လို့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးနွေးထွေးသောမုန့်အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲသံဖြူသိုလှောင်ရုံများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေခဲသေတ္တာသည်လက်ကားဘီစကွတ်မုန့်များကိုသံဗူးများနှင့်အတူသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏မုန့်ဖုတ်ထားသောကွတ်ကီးများကိုဒုတိယအတွေးမပါပဲရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းနိုင်သည်။ သံဗူးများသည်ကြာရှည်ခံ။ ခိုင်ခံ့သောအရည်အသွေးများရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူအေးခဲစေနိုင်သည်။ ကွတ်ကီးသိုလှောင်ထားသောဘူးများအေးခဲနေခြင်းကကွတ်ကီးအများကြီးကိုလတ်ဆတ်သောနှင့်စားသုံးနိုင်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။
Tin-Packaging offers some of the greatest and safe ways to packs your cookies. We can assure you that our packaging would help enhance your product image and brand name. For more information, please ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
နောက်တစ်ခု - လက်ကားသေတ္တာတင်များထုတ်လုပ်သူများတရုတ် - Tin Packaging Ideas 2020